1 Chronicles 16 KJV - 1 Berɛsosɛm 16 ASCB
1 Berɛsosɛm 16:1-43
1Na wɔde Onyankopɔn Apam Adaka no kɔsii ntomadan sononko bi a Dawid asiesie mu, na wɔbɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoeɛ afɔdeɛ wɔ Onyankopɔn anim. 2Dawid wieeɛ no, ɔhyiraa nnipa no wɔ Awurade din mu. 3Na ɔkyɛɛ Israelfoɔ mmaa ne mmarima nyinaa aduane. Obiara nyaa burodo mua, nankum ne bobe aba ɔfam.
4Dawid yii saa Lewifoɔ yi sɛ wɔnni nnipa no anim wɔ ɔsom mu, wɔ Awurade Apam Adaka no anim, na wɔmfa so nsrɛ ne nhyira, na wɔnna Awurade, Israel Onyankopɔn ase na wɔnkamfo no. 5Asaf a na ɔda kuo yi ano no bɔɔ kyankyan no. Na nʼabadiakyirefoɔ yɛ Sakaria a ɔtɔ so mmienu, afei, Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom ne Yahasiel. Wɔn na wɔbɔɔ mmɛnta ne asankuten. 6Asɔfoɔ Benaia ne Yahasiel taa bɔ ntotorobɛnto wɔ Onyankopɔn Apam Adaka no anim.
7Saa ɛda no, Dawid de saa aseda dwom a ɔde ma Awurade yi maa Asaf ne ne mfɛfoɔ Lewifoɔ:
8Ɛda Awurade ase na da ne kɛseyɛ adi.
Ma ewiase nyinaa nhunu deɛ wayɛ.
9Monto dwom mma no, monto ayɛyie dwom mma no;
monka nʼanwanwadeɛ no nyinaa.
momma wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no nnya akoma mu anigyeɛ.
na monhwehwɛ nʼanim ɛberɛ biara.
12Monkae anwanwadeɛ a wayɛ,
ne nsɛnkyerɛnneɛ ne atemmuo a ɔbuiɛ.
13Ao Israel mma, Onyankopɔn ɔsomfoɔ,
Ao Yakob mma a wapa wɔn.
14Ɔyɛ Awurade, yɛn Onyankopɔn;
nʼahennie da adi wɔ asase so nyinaa.
asɛm a ɔhyɛ maa awoɔ ntoantoasoɔ apem no.
16Yei ne apam a ɔne Abraham yɛeɛ
sɛ kyɛfa a ɛbɛyɛ wʼagyapadeɛ.”
19Ɔkaa yei wɔ ɛberɛ a na wɔnnɔɔso,
ahɔhokuo ketewa bi a wɔwɔ Kanaan.
20Wɔfirii aman so kɔɔ aman so,
firii ahemman mu kɔɔ ahemman mu.
21Nanso, wamma obi anhyɛ wɔn so;
wɔn enti, ɔkaa ahene anim sɛ;
na monnyɛ mʼadiyifoɔ bɔne bi.”
Ɛda biara mompae mu nka asɛmpa no sɛ ɔgye nkwa.
24Mommɔ nʼanimuonyam nneyɛɛ ho dawuro wɔ amanaman mu.
Monka anwanwadeɛ a ɔyɛ nkyerɛ obiara.
25Awurade yɛ kɛseɛ! Na ɔfata ayɛyie!
Ɛsɛ sɛ wɔsuro no sene anyame nyinaa.
26Anyame a wɔwɔ aman foforɔ so yɛ ahoni bi kwa,
27Animuonyam ne tumi atwa ne ho ahyia,
ahoɔden ne ahoɔfɛ wɔ nʼatenaeɛ.
28Momfa mma Awurade, Ao amanaman mmusuakuo,
29Momfa animuonyam a ɛfata mma Awurade!
Momfa mo afɔrebɔdeɛ mmra mmɛsom no.
Wɔatim ewiase denden a ɛntumi nhinhim.
31Momma ɔsoro ani nnye na asase nsɛpɛ ne ho!
Momma aman nyinaa nte sɛ, “Awurade yɛ ɔhene!”
32Momma ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa nteam nkamfo no.
Momma mfuo ne wɔn nnɔbaeɛ mfa ahosɛpɛ mpue.
33Momma kwaeɛm nnua nnyegyeeɛ
nyɛ ayɛyie Awurade anim!
Ɛfiri sɛ ɔrebɛbu asase atɛn.
34Monna Awurade ase, ɛfiri sɛ ɔyɛ
na nʼadɔeɛ wɔ hɔ daa.
35Monteateam sɛ, “Gye yɛn, Ao yɛn nkwagyeɛ Onyankopɔn!
Boa yɛn ano, na gye yɛn firi amanaman nsam,
na yɛadi ahurisie akamfo wo.”
36Ayɛyie nka Awurade, Israel Onyankopɔn,
ɛmfiri mmerɛsanten nkɔsi nnasanten.
Na nnipa no nyinaa gyee so sɛ, “Amen!” Na wɔkamfoo Awurade.
Yerusalem Ne Gibeon Ɔsom
37Dawid hyehyɛ maa Asaf ne ne mfɛfoɔ Lewifoɔ no sɛ wɔnsom daa wɔ Awurade Apam Adaka no anim, na wɔnyɛ deɛ ɛhia sɛ wɔyɛ no da biara. 38Saa ekuo yi mu nnipa ne Obed-Edom (a ɔyɛ Yedutun babarima no), Hosa ne Lewifoɔ aduosia nwɔtwe a wɔyɛ apono anohwɛfoɔ.
39Dawid de ɔsɔfoɔ Sadok ne ne mfɛfoɔ asɔfoɔ tenaa Awurade Ahyiaeɛ Ntomadan a ɛwɔ bepɔ Gibeon mu no, sɛ wɔnsom Awurade anim wɔ hɔ. 40Anɔpa ne anwummerɛ biara, wɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia a wɔayi asi hɔ ama saa dwumadie no so. Na wɔdii biribiara a wɔatwerɛ sɛ Awurade mmara a ɔde ama Israel no so. 41Dawid sane yii Heman, Yedutun ne afoforɔ bi a wɔbobɔɔ wɔn din, yiyii wɔn no sɛ, wɔnna Awurade ase “Na nʼadɔeɛ no tim hɔ daa.” 42Heman ne Yedutun bɔɔ wɔn ntotorobɛnto, kyankyan ne nnwontodeɛ ahodoɔ de gyegyee ayɛyie nnwom a wɔto maa Onyankopɔn no ho. Na wɔyii Yedutun mmammarima maa wɔyɛɛ apono anohwɛfoɔ.
43Na nnipa no nyinaa sane kɔɔ wɔn afie mu. Dawid nso sane kɔɔ ne fie, kɔhyiraa ne fiefoɔ.
ASCB : 1 Berɛsosɛm 16